Raspberry Pi Pico, microcontroller kwemadhora mana chete | Linux Vakapindwa muropa
Iyo raspberry kambani inoramba ichiwedzera bhuku rayo. MunaNovember akatanga iyo Raspberry Pi 400, sarudzo yakanakisa kana tichida kushandisa Raspberry Pi sekombuta mune dzakawanda kesi. Nekutonhora kuri nani, vakaganhurira chishandiso zvishoma uye, jack chiteshi uye kufamba zvakaparadzana, zviri nani pane yakapfava ndiro. Zvino ivo vaparura chimwe chitsva, microcontroller yavakabhabhatidza se Raspberry Pi Pico.
Iyo Raspberry Pi Pico yakaiswa pane iyo RP2040, microcontroller chip yakagadzirirwa nevanjiniya vekambani. Iyo RP2040 inosanganisira a Dual musimboti ARM Cortex M0 processor+ ine 264KB ye RAM uye rutsigiro inosvika 16MB yekunze flash memory kune chip. Kufanana nemamwe ese Hardware ekambani yejasiperi, tinogona kuwana ruzivo rwakawanda nezve ichi chinhu chitsva, zvese zviri pamutemo nekambani uye nenharaunda.
Nhasi, isu takaparura yedu yekutanga microcontroller kirasi chigadzirwa: Raspberry Pi Pico. Yakatengwa pamadhora mana chete, yakavakirwa paPR4, chip nyowani yakagadzirwa pano paRaspberry Pi. Kunyangwe iwe uchitsvaga yakamira yega bhodhi yekumisikidzwa budiriro kana yekuwedzera-kune yako Raspberry Pi komputa, kana iwe urikungotanga ne microcontroller, iri bhodhi rako.
Nhamba yepamusoro yave kuwanikwa yekutenga, asi chete kubva kuzvitoro zvinotenderwa neiyo mhando. Kuti tiitore, tinofanirwa kuenda ku Iyi link, ratidza nyika yatiri uye sarudza chimwe chezvitoro zviripo, zvakadai seKUBII, raspipc.es kana Tiendatec. Zvichienderana nesarudzo yakasarudzwa, mutengo kuSpain neVAT unosiyana pakati pe € 4.15 ne € 4.84.
Zviri pachena kuti iyo Peak kwete chidimbu chehardware chevateereri vese, asi zvirokwazvo kune vazhinji vashandisi vasingade zvese zvinopihwa neRaspberry Pi uye vanozogashira kuvhurwa uku.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Raspberry Pi Pico, iyo raspberry kambani inotangisa microcontroller kwemadhora mana chete